Wararka - Madxafka bandhigii ugu dambeeyay ee FIT waa janno dhulka ku taal
Calanku wuxuu ku dhawaaqayaa khadka bandhigga ee 27th Street ee Manhattan, si kastaba ha noqotee, booqdayaasha madxafka FIT ayaa laga yaabaa inay u diyaargaroobaan waxa iyaga ku sugaya "Soo jiidashada: Rose ee moodada."
“Soo jiidasho leh: Rose in Fashion” waa bandhiggii ugu horreeyay kadib xidhitaanka machadka. Bandhiggu wuxuu si xor ah u furmi doonaa 6 -da August wuxuuna socon doonaa ilaa 12 -ka November.
Calaamadda derbiga-dabaqa ee ku taal lobby-ga waxaa lagu sharraxay laamo ubax waxayna ku wareegsan tahay sawir aad u weyn oo ka mid ah in ka badan 130 shay oo la soo bandhigay saddex qarni-V. Buso stilettos-iyo canabku waxay ku dhagan yihiin albaabka laga soo galo bandhigga Jaranjarada cidhiidhiga ah waxay muujinaysaa weynaanteeda muuqaalka iyo dheelitirka, laakiin si loo qaddariyo hamiga tacliimeed ee ururkeeda aan caadiga ahayn, qofku wuxuu u baahan yahay inuu dhex galo.
Bandhigu wuxuu u qaybsan yahay laba galleri. Ugu horreyn, qaab dhismeed xusuusinaya taambuug xiran, oo ku soo bandhigaya koofiyado mawduucyo leh oo ka socda milleriyeyaal caalami ah oo kala duwan iyo shirkado naqshadeynta moodooyinka oo ku yaal saldhigyada dhaadheer ee jirridda leh, oo abuuraya horumar ka hooseeya iftiinka macmalka ah ee beerta gudaha. Sida laga soo xigtay matxafka, galalka waxaa sidoo kale ku jira in ka badan 75 sawirro sawirro asal ah oo dadka xirta ubaxyo laga soo bilaabo 1850 -kii illaa 1920 -kii. Bogga bandhigga wuxuu sheegayaa in “istuudiyaha iyo sawir -qaadista hiwaayadda ay sii noqonayaan kuwo la heli karo.”
Galbeedka ugu weyn wuxuu dhiirrigeliyaa ubaxa isla magaca ah heer cusub ee deegaanka beerista. Darbiyada waxaa lagu qurxiyay ubaxyo jilicsan, muusigga asalka ah ayaa u sharfaya iyaga, iyo laamiga waxaa ku xardhan dhulal beerta. Muuqaalka ugu yaabka badan ee galaangalku waa habka aan caadiga ahayn ee lagu muujiyo walxaha. Looma habayn siday u kala horreeyaan. Taa bedelkeeda, qaybaha loo qoondeeyay midabyo gaar ah-casaan, casaan cirro leh iyo caddaan, madow iyo inta kale ee “isku qasan”-iyo macnahooda astaanta dhaqameed ee u dhigma ayaa si faahfaahsan loogu sharraxay taargo macluumaad oo badan oo ku yaal bandhigga.
Ilaa xad, ruuxa bandhigga laftiisu waa sida ubax. Haddii walxaha lagu soo bandhigay kala duwanaanshaha la yaabka leh ay yihiin ubax, markaa agabyada macluumaadka ee ku xeeran sida jirridaha ayaa bixiya shaqooyin muhiim ah iyagoo muujinaya sooyaalka taariikheed ee jiritaankooda iyo ujeeddooyinka naqshadeeyaha abuuray.
Mid ka mid ah calaamadaha ugu horreeya ee ka muuqda bandhigga ayaa muujinaya sida ay u adeegsato astaanta ubax sida muraayad si loo baaro loona dhaleeceeyo bulshada. Astaanta ayaa sharraxaysa sinnaan la'aanta warshadaha samaynta ubaxa macmalka ah oo caan ku ahayd magaalooyinka moodada waaweyn laga soo bilaabo 1860kii ilaa horraantii 1960kii. Magaalada Paris, tani waa ganacsi xirfadeed iyada oo loo marayo tababarro, laakiin New York iyo London, badeecadaha isku mid ah ayaa ku dhawaad ​​guud ahaan soo saaray dadka waaweyn iyo carruurta ku hoos jira xaaladaha dhididka. Alaabooyinkaan waxaa saameeya midabada sunta ah, qiiqa kululaynta, iyo iftiin aan ku filnayn.
Xilliga hadda jira wuu ka duwanaan karaa, laakiin dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha iyo deegaanka ee wax -soo -saarka ballaaran ee dharka macaamiisha ayaa weli jira.
Qayb kasta oo midab leh oo ka mid ah galabta labaad waxay ku salaysan tahay yoolalka maskaxda ee galabta kowaad. Website -ka madxafka ayaa sheegaya in labada qaybood ee hore ay dhaqan ahaan la xidhiidhaan dhinacyo kala duwan oo dheddignimo. Gaduudku wuxuu la xiriiraa “jaceyl, kalgacal iyo cibaado”, halka casaan cad iyo cirro ay astaan ​​u tahay “xafladda qaangaarka-dhalashada ilaa guurka” iyo “luminta bikradnimada iyo dhimashada”.
Warshadaha dhaqan ahaan u tixgeliya dumarka inay yihiin macaamiisha ugu weyn laakiin dabaqadooda sare ay ku badan yihiin ragga caddaanka ah, waxqabadka dheddignimadu waa mid xiiso leh. Madxafku wuxuu go’aansaday inuu dhowaan helo shaqada Ninomiya Noir Kei Ninomiya, oo dharkeeda oo aad u tiro badan la barbardhigay ubaxyo aad u tiro badan, kuna daray aragti cusub wadahadalka. Qalabka loo yaqaan 'Ninomiya laser-cut' ayaa si aad ah loogu dhejiyay suunka maqaar macmal ah ee la Max Max, isagoo ku daraya gees gees iyo geesinimo leh. Websaytka matxafka ayaa leh “diido fikradaha nugul ee laga yaabo inay la xiriiraan ubaxa ama dumarka.”
Qeybta gaduudan ayaa sidoo kale ka qeybgashay nooc kale oo faallooyin sociopolitical ah, oo ay ku jirto dharka Prabal Gurung oo suun leh, oo la weydiinayo "Yaa noqon doona Ameerika?" Laga soo bilaabo bandhigiisii ​​guga 2020. Iyadoo la tixgelinayo in Gurung aqbalay loolanka ka hor inta aan lagu dhawaaqin mawduuca Met Gala ee 2021 “In America”, waxay umuuqataa cadaalad in shaqadiisu ka muuqatay roogga gaduudan oo hadda lagu soo bandhigay bandhigga “In” ee Xarunta Dharka Anna Wintour. . Maraykanka: Qaamuuska Fashion. ”
Qeybta madow waxay si xiiso leh u dhexgaleysaa xarrago qadiimiga ah iyo isku -dhafka Gothic -ka macaan, halka qeybta isku -dhafan ay xaqiijinayso diiradda bandhigga ee ku aaddan jinsiga iyadoo muujineysa ubaxyo mood lab ah iyo naqshad dhexdhexaad ah.
Naqshadeeyaha madaxa -bannaan ee New York Neil Grotzinger ayaa soo bandhigay shaqooyin muujinaya muujinta diidmadiisa raganimada sunta ah iyo khalkhal galinta kacsiga, adeegsiga agabyada xeerka dheddigga iyo adeegsiga siyaasadeed ee ula kaca ah ee hufnaanta. Websaytka matxafka ayaa sheegaya in ururinta “ay sahaminayso fikradaha ragannimada, ka -fiirsashada, awoodda, iyo galmada”.
Doorarka jinsiga, sida ubaxyada macmalka ah, waxay ku faanaan dhalanteedka dabeecadda, iyagoo qarinaya dadaalka iyo ujeeddada ka dambaysa dhismahooda iyo dayactirkooda. Si kastaba ha noqotee, iyadoo xuquuqda dadka jinsi-doonka ah ee caadiga ah iyo dadka aan jinsiga ahayn ay sii socdaan weerarrada, xiisaha lama filaanka ah ee moodada caadiga ah ee hermaphrodite ayaa ugu dambayn ah dib-u-noqosho, "yaab leh" soo jiidashada xiisaha leh, ama calaamadda riyooyinka. U fiirso in qofka la hayb -sooco uu si ammaan ah oo farxad leh u muujin karo in adduunyadiisu xaqiiqda ku soo fool leedahay.
Ugu dambayntii, iyada oo ay ugu wacan tahay ka-qaybgalka saddexda taariikh-yaqaanka ee dhammaystiran, “Maandooriyaha: The Rose in Fashion” ayaa aqbalay dib-u-eegis tacliimeed oo ku saabsan moodada: Agaasimaha MFIT iyo Madaxa Curator Valerie Steel iyo Dugsiga Dhaqanka ee London Professor Amy de Co-curator of la Haye iyo Coron Hill, ilaaliyaha MFIT. Bandhigga tooska ah waxaa weheliya seminaar dal -ku -gal ah oo la qabtay Abriil 30. Wuxuu ka kooban yahay shan casharro, oo laga daawan karo kanaalka YouTube -ka ee MFIT, iyo buug ay isku magac yihiin de la Haye oo ay daabacday Jaamacadda Yale University Press.
Dadka reer New York waa inaysan naftooda ka qaadin fursadda marqaatiga, gaar ahaan ardayda Baruuk, MFIT waa 15-daqiiqo oo socod ah oo ka socota xerada.